Sida aan soo sheegnay ka hor, binta kala duwan yihiin sida ay taariikhaha safarka aad, marka waxaad ubaahantahay inaad tikidka tigidhkaaga sida ugu dhaqsaha badan markuu helitaanku furmo. Hadaad ballansato waqti hore, aad doonaa in la raadinaya in ay bixiyaan oo ku saabsan 92 dollar wareega safarka, ama ku saabsan 46 dollar hal hab. Sugitaanka ilaa daqiiqada ugu danbeysa eryi karaa qiimaha samada sare, kharashka ku dhow laban laabmay dambe aad ka iibsan tigidhka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-amsterdam-direct-train%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)